Igumbi lesitayela seRetro kunye nomdlali werekhodi wevinyl kwiCASA Meisu kunye neGuanyinqiao Centre
·verified · exclusive listing·󰀃I-Superhost·
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe ongu晗二水
Ukukhanya kunye noyilo lobuhle obutofotofo, indibaniselwano ye-retro eluhlaza kunye ne-velvet ebomvu itsala amehlo.
Indawo: Xinhua Xiexin Centre Apartment (No. 68, Yanghe 1st Road, Guanyin Bridge, Jiangbei District, Chongqing)
Indawo esembindini yesithili soshishino saseGuanyinqiao. Ngaphantsi kwe-Xiexin Starlight 68 Plaza kunye ne-Pei Jie Hot Pot, kunye ne-Hilton Hotel ichasene. Kuhambo lwemizuzu emi-5, kukho iindawo zokuhlala ezichumileyo njengeBeicheng Tianjie, iGuanyinqiao Pedestrian Street, kunye neBeicang.
Uhlobo lweyunithi: Igumbi eliphakamileyo elinemigangatho emibini, elineemitha ezingama-30 zegumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela kumgangatho wokuqala, i-30 yeemitha zesikwere zamagumbi amabini okulala kumgangatho wesibini, igumbi lokulala elikhulu elinebhedi ye-1.8m, kunye negumbi lokulala lesibini. kunye nebhedi ye-1.5m, ekwazi ukuhlalisa abantu aba-4.
Ezothutho: Unokuhamba ngeenyawo ukuya kwisikhululo seMetro saseGuanyinqiao okanye kwiSikhululo seMetro saseHongqihegou ngemizuzu eli-10.
Imizuzu eli-15 ukuya eChongqing High-Speed Railway North Station ngololiwe ohamba ngaphantsi komhlaba, imizuzu engama-35 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseJiangbei, imizuzu eli-15 ukuya eJiefangbei naseHongya Cave.
Kuthatha malunga nemizuzu eli-15 ngeteksi ukuya eChongqing High Speed Railway North Station, imizuzu engama-30 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseJiangbei, kunye nemizuzu engama-20 ukuya eJiefangbei naseHongyadong.
Ukuxhasa: Iprojekti ye-S2 encinci, irekhodi yevinyl, ukufudumeza kunye nokupholisa umoya we-air conditioner, i-100M Broadband, umatshini wokuhlamba imigqomo, ifriji encinci.
Indawo yokupaka: igaraji yoRhwebo yokupaka, iiyuan ezi-4 ngeyure, iiyuan ezi-2 ngeyure emva kweeyure ezi-2, hayi ngaphezulu kwe-15 yuan kwiiyure ezili-12, kwaye akukho ngaphezulu kwe-25 yuan kwiiyure ezingama-24.
Ukubonelela ngeetawuli zokubulala iintsholongwane, iibrashi zamazinyo ezilahlwayo kunye ne-slippers kubantu aba-4 ngosuku lokungena.
Isikhumbuzo esibalulekileyo: Ngexesha lobhubhane, iindwendwe ezisuka kwiindawo ezisengozini kakhulu aziyi kwamkelwa. Nceda uthathe inyathelo lokuqala ukuqonda kunye nokuthobela imithetho karhulumente yothintelo nolawulo lobhubhane.
Indawo esembindini yesithili soshishino saseGuanyinqiao. Ngaphantsi kwe-Xiexin Starlight 68 Plaza kunye ne-Pei Jie Hot Pot, kunye ne-Hilton Hotel ichasene. Kuhambo lwemizuzu emi…
“Njengoko ubusuku buwela, kunye nomculo weklasikhi odlalwa ngumdlali werekhodi wevinyl, ehleli kwisihlalo sokhuni kwigumbi lokuhlala ezulazula ngobuhle bombhalo, okanye encike kwifestile ye-bay ejongene nezibane ze-neon zesixeko esiphithizelayo.”
“Njengoko ubusuku buwela, kunye nomculo weklasikhi odlalwa ngumdlali werekhodi wevinyl, ehleli kwisihlalo sokhuni kwigumbi lokuhlala ezulazula ngobuhl…
- 晗二水, umbuki zindwendwe wakho
4.97 (iingxelo zokuhlola 136)
Indawo esembindini yesithili soshishino saseGuanyinqiao. Ezantsi kukho i-Xiexin Starlight 68 Plaza kunye nodade osaziwayo we-Pei imbiza eshushu, ejongene neHotele yaseHilton. Kuhambo lwemizuzu emi-5, kukho iindawo zokuhlala ezichumileyo njengeBeicheng Tianjie, iGuanyinqiao Pedestrian Street, kunye neBeicang.
Kuthatha malunga nemizuzu eli-15 ngeteksi ukuya eChongqing High-speed Railway North Station, kwaye malunga nemizuzu engama-20 ukuya eJiefangbei naseHongyadong.
Umbuki zindwendwe ngu- 晗二水
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R5000